Ukuqashelwa Ubuso Kuza Kumakhamera Omzimba Wamaphoyisa | Izixazululo ze-OMG
Ukubonwa kobuso kungenzeka kuguqulwe ukuphepha kwezikhumulo zezindiza zethu, izindawo zokusebenzela, kanye namakhaya, kodwa ekusebenzeni komthetho, lapho umuntu angalindela ukuthola ukuthathwa kobuchwepheshe obukhulukazi nobunamandla, akubanga ngumkhumbi olwandle. Izinsolo zokunganembi, ukungabi semthethweni, ukukhetha, nokungaphumeleli seziyinto esejwayelekile. Kepha inkinga yangempela ukuthunyelwa kwazo zonke izinjini ezilawula izixazululo zokubona kobuso zidinga ukuqeqeshelwa umhlaba wangempela. Futhi, okuphawuleka kakhulu, ama-wrappers azungeze ukusetshenziswa kanye nohlelo lobuchwepheshe adinga ukwakhiwa kahle.
Ukuqashelwa kobuso kwasekuqaleni kwenzelwa isiqiniseko sokuhlukaniswa nokulawulwa kokufinyelela, ukusebenza ezimeni ezilawulwayo nokuqinisekisa ukuthi umuntu ungubani ukuthi ungubani. Manje amakhamera ahlola izixuku, aqhathanisa bonke ubuso obudlulayo nohlu lokubuka. Lokhu ngokwami ​​kukhungethwe yinkimbinkimbi. Kepha uma kunomdlalo, kwenzekani ngokulandelayo? Ngabe izinhlelo zingabika kanjani ngekhwalithi yedatha, izimo zezemvelo kanye nokushaya iminyango? Abasebenzisi bangakususa kanjani ukugxila kubuchwepheshe buye emiphumeleni?
Ngokutholwa kweqembu manje sisendleleni, kungahle kube nokukhohlisa okwanele ukunquma lezi zinselelo. Amaphoyisa ahlola ngentshiseko ukuvuma kobuso, enza amacala okusebenzisa. Kusenomsebenzi omningi okusamelwe wenziwe, kepha impendulo yaleyo nselelo yokuhanjiswa kungenzeka ibe, ngqo phambi kwabo.
Izindaba zangesonto eledlule zokuthi i-FBI ibilokhu ihlola ukubonwa kobuso e-Amazon yahlangatshezwa namazinga okulindeleke ukuthi aqede ehholo lobumfihlo elinqume ukuthi ukuqashelwa kobuso kwezomthetho kube yisikhathi esibi. Njengoba kwenzeka, isibonelo esikhonjwe yi-FBI lapho ubuchwepheshe bebungasetjenziswa khona bucishe bube obuncane kakhulu obungahle bube nobungangabazeki: ukusula izinkulungwane zamahora evidiyo erekhodiwe ukubona umdubuli weVegas, uStephen Paddock. Sibe nabamele kanye nabahlaziyi, abayisishiyagalombili ngokushintshwa, abasebenza i-24 / 7 amasonto amathathu behamba beqopha i-video ukuqoshwa kwePhini LikaSekela Mqondisi Wosizi uChristine Halverson etshela umhlangano we-AWS ngoNovemba.
Noma abenzeli abaningi bezomthetho besebenzisa ukubonwa kobuso ukuhlola ukuqoshwa kwamavidiyo aqoshwa, ukonga isikhathi nemizamo, kunzima kakhulu ukusebenzisa ngesikhathi sangempela, emhlabeni wangempela. I-mathematics yokuhlola yonke i-onlooker endaweni enabantu abaningi iphikisana nohlu oluncane lwewashi kugcizelela ukuqashelwa kobuso bakho emikhawulweni yayo. Yizinhlelo ezinhle kakhulu kuphela ezingaphatha. Njengomphumela, kusekhona ukwamukelwa kobuso obuncane okujwayelekile ngokujwayelekile okusetshenziswa emaphoyiseni ajwayelekile. Kepha lokho sekuzoshintsha.
Amandla athile abheka izinketho zokuqashelwa kobuso besikhathi sangempela ngamaphoyisa aseMetropolitan eLondon. UKhomishani uCressida Dick uthe ngonyaka odlule ukuthi ukuqashelwa kobuso sekuba ngcono ngomzuzu. Ngicabanga ukuthi umphakathi uzosilindela ukuthi sicabange ngokuthi singawusebenzisa kanjani lobuchwepheshe futhi sibone ukuthi siyasebenza futhi siyasisebenzela. Kepha ngoDisemba, ngesikhathi Amaphoyisa Amaphoyisa epaka iveni ebonwa endaweni yaseSokho enesixhaxha samakhamera abekwe ophahleni ukubheka izixuku zikaKhisimusi lapho kubhekwa khona uhlu lwewashi lezigelekeqe ebezifuna ukudingidwa, lokho kuholele ekutheni kube nezimpendulo ezivela kwizishoshovu zobumfihlo. Umqondisi weBig Brother Watch wakubiza njengokuchitha okwesabekayo isikhathi samaphoyisa nemali yomphakathi wathi sekwedlule isikhathi ngoba amaphoyisa alahla lobu buchwepheshe obunobungozi futhi obungenamthetho.
Ngokubona izici eziphikisayo zobuchwepheshe, Amaphoyisa Amaphoyisa akwenzile kwacaca ukuthi ukulangazelela kwawo ukuxhuma. U-Ivan Balhatchet, ongumholi we-Met wokuhola ebusweni ngokubonakalayo, esitatimendeni sangoDisemba ukuthi siyaqhubeka nokuxhumana nababambiqhaza abaningi abahlukene, abanye ababhekana ngqo nokusebenzisa kwethu lobu buchwepheshe ukuze sikhombise ukucaca futhi siqhubeke nenkulumompikiswano eyakhayo, simeme abantu namaqembu anokubukwa okungathembekile ekusebenziseni kwethu ubuchwepheshe bokubona ubuso kulokhu kuthunyelwa.
Ukwahlukanisa ukuqashelwa kobuso, amakhamera agqokwa ngomzimba asevele ekubonile ukwamukelwa ngobuningi. Lawa madivayisi egqokwa ngomzimba manje afaka umfaniswano wamaphoyisa emhlabeni jikelele, ahlinzeka ngokulawulwa kobufakazi, ukuphepha kwamaphoyisa, kanye nokunethezeka komphakathi. Amakhamera agqokwa ngomzimba aqopha ividiyo yokulayisha kabusha ezinhlelweni zokugcina ezakhiwe emzimbeni noma efwini. Amakhamera agqokwa ngomzimba nawo asakaza bukhoma ividiyo emuva kumakamelo okulawula. Abanye baxhumeka kuma-holsters ezikhali ukwenza kusebenze ukuqoshwa kwevidiyo ngokuzenzakalela. Njengoba amadivaysi eselula athuthuka, amamodeli amasha amakhamera womzimba asuselwa kuzinkundla ezisebenza ngeSmartphone asethelwe ukuba ayale ngokwengeziwe. Lokhu kusho ukuthi ezobuchwepheshe ezimbili zizohlangana. Ukuqashelwa kobuso kwikhamera egqoke umzimba kuyisinyathelo esilandelayo esithandekayo. Ukuvumela izikhulu ezinezinhlu zokubuka izigebengu ezifunwayo, abantu abanentshisekelo, izingane ezilahlekile, abantu abadala abangatholwa… Uhlu luyaqhubeka.
NgoDisemba, njengoba iLondon iphikisana neveni yayo eluhlaza okotshani, ukuhlolwa okuhlukile kokubonwa kobuso bekwenzeka kwelinye idolobha lomhlaba elinamakhilomitha amaningi kude. Lokhu kuhlolwa akwenzanga izihloko. Izici zalo azivezwanga. Kepha kuchazwa ngokwengeziwe ukuthi ukwamukelwa kobuso kuzothunyelwa kanjani emaphoyiseni angaphambili. NjengaseLondon, okungcono kakhulu ukuya emigwaqweni yedolobha ngekhathalogi yokubuka yabantu abacishe babe yizinkulungwane ezimbili.
Kepha lokhu kunaka kokumisa ukuyeka nokuzingela, ngokuqashelwa kobuso kwikhamera yomzimba, kungekudala kwe-CCTV noma ama-vean surveillance vans. Isivivinyo senza ezinye izikhulu zigqoke amadivayisi abesebenza ngesikhathi sangempela kusuka kuhlu lokubuka olufanayo. Ehoreni lokuqala, kwaboshwa futhi amadoda amabili aqoshwa ngokufana. Abasolwa manje sebehlukunyezwa.
Ukuma nokusesha kuyimpikiswano ngokwayo. Lawo mandla afinyelela emgodini wamaphoyisa ngemvume, aphakamise imibuzo mayelana nokuphawula kanye nokukhetha kanye nokuzithethelela. Noma ngabe kukugxekwa kangakanani, kungasebenza kahle kakhulu, ukuthatha izikhali emgwaqweni nokubopha labo abangabanikazi bazo. Bona ukuqinisekiswa kuyingxenye esemqoka yendlela. Amakhamera Omzimba aqashelwa ebusweni aqinisekisa ukuthi ubunikazi bawo buhlolwa kahle, konke kuyahambisana nenqubomgomo. Abephula umthetho owaziwayo, abantu abanentshisekelo-noma ngabe bakhonjwa noma cha, izingane ezingatholwa kalula kanye nabantu abadala, bonke bangakhonjwa kanjalo. Njengosizo emaphoyiseni aqondiswa yi-intelligence aqondiswa kuveza izinzuzo ezinkulu. Ukuboshwa okuchazwe ngaphezulu kwenziwa kuphela ngamasu anjalo.
Ukusetshenziswa kokuqashelwa kobuso kumakhamera omzimba nakho kunikela ekuzivikeleni ngokumangalelwa kokukhetha ubuhlanga. Izinqubomgomo zingasethwa ukugwema abaphathi abasesha abangakhonjwa ngokubona kobuso, noma bemisiwe. Lapho kwenziwa khona icala lokuthi kumiswe futhi kuseshe ubugebengu obusezingeni eliphansi emiphakathini eqondile, ukuqashelwa kobuso kumakhamera omzimba kunikeza ukulingana. Yilolu hlobo lokuphepha oluzosiza ukwamukelwa okubanzi.
Ukuqashelwa kobuso kumakhamera omzimba kuzonikeza futhi ukuqinisekiswa kwesibili kwemidlalo evela ezimotweni zokubhekwa kwamakhamera kanye namakhamera we-CCTV. Ngemuva komdlalo wokuqala, iphoyisa elihamba ngezinyawo liya kulowo muntu futhi ligijime isheke lesibili kusuka kumakhamera omzimba, lisebenzisa uhlu olufanayo lwewashi. Kuphela uma kunomdlalo othathwa phambili. Ngokwami, lokhu kuvikela kakhulu ezintweni ezibonakalayo okuthiwa zengozi. Futhi kunikeza umuntu ukuxhumana komuntu ngaphambi kokuthi kuthathwe noma yisiphi isinqumo sokuphetha ngokuboshwa.
Ubuhlakani be-Edge Artificial:
Ukuxhumeka kwamakhamera amaningi ezinhlwini ezifanayo zamawashi futhi elinye nelinye kuvula izinzuzo ezibanzi zokusebenzisa ubuhlakani. Enye inzuzo yalokhu amandla okusebenzisa amakhamera womzimba anobuhlakani ngokunikeza umdlalo wokuqala, ngokuyisisekelo anciphisa i-haystack, ngomdlalo bese uthunyelwa ohlelweni olususelwe efwini olusebenzisa injini efanayo ye-AI, noma injini ehlukile ye-AI, noma izinjini eziningi ze-AI, ukunikeza isihlungi esilungile kakhulu ngaphambi kokuthi kufakwe 'umdlalo' ku-opharetha. Konke lokho bekuzokwenzeka ngemizuzwana emibili.
Lokhu kufanele kube unyaka lapho ukuqashelwa ebusweni kushaqa izinsolo zokubandlulula okungokwemvelo nokungahambi kahle. Kufanele kube unyaka lapho kunokwamukelwa ukuthi akubona bonke ubuchwepheshe bokubona ubuso buyefana. Amathuluzi ahlukene kufanele atholakale ngezinhloso ezahlukahlukene. Futhi ukuhlolwa okungenamsoco kwezinjini ezinjalo ezimeni ezilawulwayo kufanele kunikeze izinkomba zangempela zamakhasimende kanye nobufakazi bemiphumela.
Isizukulwane sokuqala samakhamera agqokwa ngomzimba ekusebenzeni namuhla sigxile ekuqopheni i-video video yezinhlelo zokulawulwa kobufakazi. Manje, Amakhamera womzimba i-2.0 azohambisa ukugxila ekusakazweni kwevidiyo bukhoma, ukuqashelwa kobuso, kanye ne-Edge-AI yedivayisi. Lesi sizukulwane esilandelayo samakhamera agqokwa ngomzimba azojoyina izigidigidi zezinye izindlela ze-IoT ezizohlelwa kumanethiwekhi we-4G nakwi-5G eminyakeni ezayo. Ekugcineni, umgoqo uzobona izinhlobo zamakhamera omzimba asetshenziswayo namuhla i-morph yaba izingcingo ezikhulukazi, ezibukhali zesikrini ezizojoyina amandla okubamba nokusakaza ngomshini wokuhlaziya we-AI nokukhiqizwa kwedatha okucebile kwisikhulu esingaphambili. Isikhathi sekhamera yokurekhoda inhloso eyodwa kuphela sizophela.
Ngokubonwa kobuso, izimpikiswano eziku-2019 kufanele zizungeze ukusetshenziswa okungalawulwa ngokuphelele kwekhono lokumaketha nokuphepha kwezentengiso. I-AI e-silicon ifakwe kumakhamera ashibhile we-IP, afinyeleleka kubo bonke. Ukusetshenziswa kwalobu buchwepheshe ekusebenzeni kwezomthetho kuzoma kube ngumbala omncane kangako.
Futhi, ngakho-ke ukuphatheka kwamaphoyisa, i-2019 izobonwa njengendawo yokuguqula ukwamukelwa kobuso. Uvivinyo lungemukelwa kokuphonswa. Ukuphakwa kuzonikeza imiphumela. Izingxabano zizonqotshwa. Iningi lomphakathi lizokhetha ukuphepha komuntu siqu nokuphepha ngaphezu kobumfihlo obuhleliwe.
Ukuqashelwa Ubuso Kuza Kumakhamera Omzimba Wamaphoyisa igcine ukuguqulwa: Okthoba 8th, i-2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-4344 Ukubuka kwe-1 Namuhla